Waaxda La-talinta - Akademiyada Farshaxanka - Axdiga Waxbarashada Shirarka
La xiriir Kooxda Adeegyada Ardayda
Xiriir joogta ah oo lala yeesho kooxdayada ayaa ah tillaabada koowaad ee guusha dugsiga!
Lataliyaha iskuulka, K – 12
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2221
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2226
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2219
503-630-5001, fidsan. 2232
Lataliyaha dugsiga dhexe
Ku soo dhowow Qeybta Adeegyada Ardeyda ee Axdiga Isku-Duwaha!
Ahmiyada koowaad ee Waaxda Adeegyada Ardayda ayaa ah in laga taageero ardayda iyo waalidiinta hadafyada waxbarasho iyo abuurida qorshayaasha guusha waxbarasho.
Hadafkayagu waa inaan siinno taageero tacliineed iyo la talin arday kasta. Kooxda Adeegyada Ardayda ayaa ka kooban La-taliyaha dugsiga iyo La-taliyayaasha waxbarashada.
La-Taliyaha Dugsiga wuxuu siiyaa adeegyo hagitaan ballaaran oo dugsiga ah, fasallada K - 12. Sannadaha dugsiga dhexe iyo sare waxay noqdaan kuwo dhib badan oo murugsan. Ardaydani waxay taageero dheeraad ah ka haystaan ​​Lataliyaha Waxbarashada (EA). Si wada jir ah, lataliyaha iyo shaqada EA waxay lashaqeeyaan ardayda iyo waalidiinta si loo hubiyo in ardayda ay horumar ku filan ka gaaraan fasaladooda sanadka oo dhan ayna ku dhameeyaan dhamaan shaqada koorsada waqtigooda.
Jawiga waxbarasho ee isku dhafan ee Axdiga Wax-barashada Summit wuxuu kuu oggolaanayaa dabacsanaan iyo is-gaadhsiin shaqsiyeed iyada oo la abuurayo waayo-aragnimo waxbarasho oo taajirsan.
Heerarka dugsiga dhexe iyo sare, waaxdeena ayaa si shakhsi ahaaneed u habeyn doonta jadwalka cunugaaga si ay ugu dhigto awooda shaqsiyeed, danaha iyo qaababka barashada hadafka ugu dambeeya ee ka qalin-jabinta dugsiga sare ama u gudubka barnaamijka Kulliyadda Hore.
Kooxda Taageerada Ardaydu waxay ka caawin doontaa cunuggaaga dhinac kasta oo safarkooda waxbarashadda ah si loogu oggolaado guul iyo barasho waayo-aragnimo macno leh leh - u diyaarinta ardayda u-gudbidda kulleejada, dugsiga farsamada, xoogga shaqada ama adeegga milatariga.
Xiriirinta joogtada ahi waa qayb loo baahan yahay oo ka mid ah guusha dugsiga.
Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay si joogto ah ula socdaan macallimiinta, la-taliyaha, iyo ardayda EA ardayda wixii su'aalo ah iyo wixii caawimaad ah ee la xiriira horumarka waxbarasho ee ilmaha.
Tallooyinka Koorsada Fasalka